China A-6 ~ Iṣakoso ngalaba ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Zọ
Mgbakọ na-ejide ya bụ usoro nke usoro abụọ ma ọ bụ karịa na-etinye gafee nkwonkwo nkwalite site na njigide ọkụ na-ere ọkụ iji belata mmebi nke nkwonkwo mbuba na-ebute n'ihi mmụba nke pipeline. A na-edobe ọgbakọ mkpanaka na - ejikwa nkwanye na - ma ọ bụ nkwonkwo nkwonkwo ga - agbatị, ọ ga - anabatakwa nrụgide static etolite na nkwonkwo mmeba ahụ. Mgbe ejiri ha n'ụzọ a, ha bụ ihe nchekwa nchekwa ọzọ, na-ebelata ọdịda nke nkwonkwo mmeba ahụ yana ọghọm nke akụrụngwa nwere ike imebi. Ogwe njikwa ga-echekwa nkwonkwo ahụ nke ọma, mana onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ike nke ọkpọkọ zuru oke iji guzogide ike zuru ezu ị ga-ezute.
A ga-eji ngalaba njikwa mee ihe mgbe ọ na-agaghị ekwe omume na ntọala enyere iji nye arịlịka zuru ezu na ọnọdụ kwesịrị ekwesị. N'ụdị ndị a, nrụgide kwụ ọtọ na sistemụ ga - eme ka nkwonkwo mgbasawanye gbasaa ruo n'itinyeghị ntọala site na mkpanaka akara nke ga - eme mgbe ahụ igbochi enwere ike imeghari ozo nke ga - eme ka nkwonkwo kwusi. Agbanyeghị oke mmachi na-ejide mkpara na nkwonkwo, a ga-eji ha mgbe enweghị ike ịnye arịlịka ziri ezi. Enweghi ike imesi ya ike na nkwonkwo mbuba roba, site na oru ha, emebeghi ya iji bibie njedebe ya, ma n ’uzo obula enwere ike ime, anchoring kwesiri ekwesi. Ọ bụrụ na eleghara eziokwu a anya, ọdịda nke nkwonkwo na-agbasawanye oge na-abaghị uru.
Mkpụrụ akụ n'èzí
Mpempe Flagba atinggwọ
Njikwa Oke Pụrụ Iche Igwe Igwe OD
Oke dayameta uhie
Okpukpo Iko Akpukpo Akara
Oke Igwe Ọdụ Ahụ Na-akpata Ọnọdụ (nrụgide ule bụ ugboro 1.5 nke nrụgide ọrụ)
Nọmba Nọmba Na-ahụ Maka Njikwa M tụrụ aro
1–3 / 8
1–3 / 4
Oke Nrụgide Maka Ngalaba Njikwa Achọghị
M tụrụ aro mkpanaka nha:
Nke gara aga: A-7 ~ njikọta roba
Osote: A-5 ~ Otu jikoro